Yakachipa Yakapetwa Hopper Yakawandisa Fertilizer Kuisa Muchina Vatengesi uye Fekitori | YiZheng
Yakapetwa Hopper Yakawanda Packaging Machine inoiswa kune otomatiki huwandu hwekupakata mukugadzira fetiraiza. Iyo yakazvimiririra yekuyera sisitimu ine yakakwira kurema kurongeka uye nekukurumidza kumhanya nekushandisa Toledo inorema sensor, iyo yese yekuyera maitiro inongoerekana yagadziriswa necomputer.
Chii chinonzi Double Hopper Quantitative Packaging Machine?
Iyo Yakapetwa Hopper Yakawanda Packaging Machine otomatiki inorema kurongedza muchina wakakodzera zviyo, bhinzi, fetiraiza, kemikari nemamwe maindasitiri. Semuenzaniso, kurongedza granular fetiraiza, chibage, mupunga, gorosi uye granular mbeu, mishonga, nezvimwe zvinoenderana nezvamunoda, iyo yakatarwa huwandu hwepakeji huremu i5kg ~ 80kg. Huwandu hwekuzadza uye kurongedza muchina muchina unonyanya kuve nezvikamu zvina: otomatiki kuyera, kuendesa zvishandiso, bhegi yekuisa chisimbiso michina uye komputa kutonga. Iine hunhu hwechimiro chinonzwisisika, kutaridzika kwakanaka, kushanda kwakatsiga, kuchengetedza simba uye kuyerwa kwakaringana. Injini huru inotora mbiri-frequency spiral propulsion, kuyera-humburumbira kuyera, tekinoroji yepamberi yedhijitari yekushandura tekinoroji, sampuro yekugadzira tekinoroji uye anti-yekukanganisa tekinoroji kuwana otomatiki kukanganisa muripo uye kururamisa.
Yakasarudzika Dhizaini seyako Chaicho Chinodiwa
Zvingakudetsera muchina zvinhu sekuda kwako: Carbon simbi, Yese isina simbi simbi 304 / 316L, kana Raw zvinhu zvekubata zvikamu ndezvisina tsvina simbi.
Zvimiro zveDhiviri Hopper Yakawandisa Packaging Machine
1.Packaging maratidziro anogadziriswa, iko kuvhiya kuri nyore pasi pechinoshanda mamiriro shanduko.
2.Zvose zvikamu zvinosangana nezvinhu zvinogadzirwa nesimbi isina chiumbwa ye304.
3.Yakazara pasuru uremu uye huwandu hwemabhegi akaunganidzwa kuratidza.
4.Special yakagadzirirwa kupa uye kuyera, panguva imwe chete kubhegi uye kudzikisa. Inoponesa chetatu chenguva yekushanda, kumhanya kwepakeji kuri kukurumidza, uye iko kurongedza kuri kwakakwirira.
5.Using kupinza sensors, kupinza pneumatic actuators, basa rakavimbika uye yakapfava kugadzirisa. Iyo chaiyo yekuyera iri kuwedzera kana kubvisa zviuru zviviri zvezviuru.
6.Wide huwandu hwakawanda, yakanyatsoita mushe, nemuchina wekusonera wekusimudza unogona kusimudzwa uye kudzikiswa patafura, mumwe muchina wakawanda-chinangwa uye kushanda kwakanyanya.
Yakapetwa Hopper Yakapetana Packaging Machine Vhidhiyo Ratidziro
Yakapetwa Hopper Yakawanda Packaging Machine Model Sarudzo
Kuyera Range (KG)
Microscopic Index Kukosha (kg)
Zana Yakagadziriswa kugadzirisa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
Mashoko Otomatiki Packaging Machine
Sewing muchina, otomatiki kuverenga, infrared tambo yekucheka, kumucheto kubvisa muchina, iwe unogona kusarudza zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi Organic fetiraiza Round makorari Machine
Ona zvimwe zvigadzirwa
Homemade Kompositi Turner